Sida loo beddelo iCloud cinwaanka e-mail
iCloud waa adeeg soo bandhigay by Apple si ay u sameeyaan qaybsiga dheeraad ah oo fudud ula qalabka macruufka. Waxaa had iyo jeer hubi in aad qabto nooca ugu dambeeya ee wax la taaban karo sida ugu xiriirada, qoraalo, barnaamijyadooda, waraaqaha, iyo sawiro eegin wax kasta oo macruufka qalab aad isticmaalayso. Iyada oo ay taasi aad leedahay awood ay ku wadaagaan goobood, jadwalka, iyo sawiro leh qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Oo weliba iyadoo la kaashanayo adeegyada la yaab leh this aad u helida hoos aad telefoonada goobta xataa haddii aad lunsan oo qalab macruufka iyo waxan oo dhan ayaa la sameeyaa si toos ah.
Hadda waxaad si fudud u heli karaan qalab kasta macruufka. Tan waxaa loo dhan lala xiriirinayay aad cinwaanka email iCloud. Si kastaba ha ahaatee haddii uu kaa lumo telefoon hab kasta ka dibna aad u gaarka ah waxaa laga yaabaa in ay halis ugu. Waxaad si fudud u beddeli kartaa cinwaanka emailkaaga ama webpage iCloud ka halkaas oo kugu xiri karaan iyo masixi telefoonka la furo. Sababo kale in aad bedesho cinwaanka email iCloud waa in ay u badan tahay waxa laga yaabaa jabsaday ama waxaa laga yaabaa in qof si qalad ah la tirtiro cinwaanka email ama sabab kasta oo kale qasay.Shacabka. Haddii aad waligaa ku kulmaan mid ka mid ah sababta kor ku hubi inaad bedesho cinwaanka emailkaaga maadaama ay tani waa talaabada ugu horreeyey ee ilaalinta gaarka ah.
Bal aan fiirino ku saabsan sida loo beddelo cinwaanka email on iCloud via qalab macruufka:
1. Open Settings aad iPod, iPad ama iPhone
2. Scroll hoos iyo tuubada on iCloud
3. Scroll hoose ee shaashadda iyo tubbada "Saxiix Out" button
4. Hadda si loo hubiyo in aad tirtiray xisaabtaada iCloud jir qalabka hadda waxa kale oo aad u baahan doontaa in tirtiraynaa sawirada ee Stream Photo ah. Tubada Continue iyo Delete
5. adeegyada goobta iPhone lahaa ayaa sidoo kale la demiyo
6. Markaas waxaa lagu weydiin doonaa in aad jeceshahay in aad sii xogta iyo xiriirada ku iPhone ka dib markii account la tirtiraa off. Waa in aad adigu si aad u tirtiri kartaa karaa haddii aad rabto.
7. Hadda in aad in goobaha haddana hormariyo on iCloud
8. Hadda waxaad geli kartaa faahfaahin login iCloud cusub oo la saxiixato
9. Dhammaan hab la mid ah waxaa soo noqnoqda, ay hadda ka codsaday in in jadwalka ku, Safari Data iyo xiriirada qalabka waa in la biireen ama aan la xisaabtaada iCloud.
10. Hadda tallaabo la soo dhaafay waa in aad leedahay si aad u doorato in aad rabto in aad isticmaasho iCloud adeegyada goobaha ama aan. Oo weliba waxaa la soo jeediyay in ay ka faa'iideystaan ​​adeeggan ay dhacdo in qalab aad kaarku lumo.
Nidaamka isku waxaa la samayn karaa on Computer ah ayaa sidoo kale, nidaamka waxa lagu sheegay hoos ku qoran:
1. Open iCloud Control Panel oo si fudud guji badhanka oo sheegay in "kala saxiixday Out" Fiiro gaar ah: iCloud Control Panel waa la heli karaa lacag la'aan ah oo ah qiimaha, kaas oo lagala soo bixi karaa ka Apple ee Taageerada Page
2. Hadda login faahfaahinta cusub oo si fudud u riix batoonka oo sheegay in "kala saxiixday In"
Sida loo Delete Apps rabin ka iCloud?
> Resource > iCloud > Sida loo beddel iCloud e-mail Address.